बाल क्लबको सहयोग र खुला दिशामुक्त क्षेत्र वीरगञ्ज « Pahilo News
बाल क्लबको सहयोग र खुला दिशामुक्त क्षेत्र वीरगञ्ज
प्रकाशित मिति : 26 February, 2017 6:35 pm
फागुन १५ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका घण्टाघर चोकबाट गाडी करीब एक सय मिटर अगाडि के बढ्दै थियो नगरपालिकाका अधिकृत सुनिल कर्णले चालकलाई गाडी रोक्न आदेश गरे । गाडीबाट झर्दा नझर्दै उनी कराए– ‘ए रुक कहाँ गएको ?’ सडक बत्तीको मधुरो उज्यालोमा देखियो । एक जना मानिस हातमा मिनरल वाटरको बोतल बोकेर पातलो झाडीतिर जाँदै थिए । कर्णले दुई–तीन पटक कराएपछि ती मानिस रोकिए । कर्ण उनी नजिक पुगे र सोधे, ‘खुला ठाउँमा दिशा बस्नु हुँदैन भन्ने अझै थाहा छैन तपाईलाई ?’ ‘सर, थाहा त छ तर… ।’ ती मानिसले अप्ठ्यारो मान्दै आधा मात्र बोले ।
‘घरमा चर्पी छ कि छैन ?’ कर्णको जवाफमा उनले भने्, ‘छ सर । तर घरमा गर्ने आदतै छैन ।’ ‘कति पढ्नु भएको छ ?’ चर्पी गएको मानिसलाई कर्ण सरले पढाईको कुरा सोधेर हैरान पारे । ‘पढ्न त ग्य्राजुएट गरेको छु सर ।’ ‘हेर, यतिको पढालेखा मान्छे यसरी खुला ठाउँमा दिशा गर्दै हिड्छ भने अरु अरुको के हाल होला ?’
त्यसपछि अबदेखि खुला ठाउँमा दिशा नबस्ने बाचा गरेर ती व्यक्ति घरतिर फर्के । ‘नगरबासीको अभिभारा, खुला दिशामुक्त बनाउँ शहर सारा’ जस्ता नाराले सिंगारिएको उपमहानगरपालिकाको गाडी वडा नं. १८ मा पर्ने लक्ष्मणवातिर मोडियो । त्यसबीच थुप्रै खुला क्षेत्र भएपनि त्यता कोही बोतल वा लोटामा पानी बोकेर गएको देखिएन । ‘केही अघिसम्म त्यो क्षेत्रमा पनि एकाबिहानै शौच गर्नेको लाइन नै हुन्थ्यो । हाम्रो गाडी अभियानको परिणाम हो यो,’ कर्ण भन्दै थिए । लक्ष्मणवा पुग्दा केही मानिस खुला चौर र खेतमा शौच गर्दै भेटिए । कर्ण, स्नेहा श्रेष्ठलगायत उपमहागरपालिकाका कर्मचारी समूहले उनीहरुलाई बोलाएर खुला दिशा गर्दा हुने हानीकाबारे सम्झाए ।
आफ्नो ठाउँलाई आफ्नै पहलमा सफा राख्नु पर्ने, सफा नभए दुर्गन्ध फैलने, रोग, महामारी फैलिनेलगायत समस्याबारे सम्झाए । घर नजिकै शौचालय बनाउनु पर्ने र भएकाले अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्नेबारे सम्झाए । धेरैले उनीहरुको कुरामा सहमति जनाए । केहीले शौचालय सरकारले बनाइदिनु पर्ने, आफूहरुलाई सरकारले रोजगारी वा खाना दिएको छ र ? भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । नगरलाई खुला दिशा मुक्त क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम लिएर हिडेको गाडी वडा नं. २८ स्थित ड्राइपोर्ट, भन्सार क्षेत्रतिर साइरन बजाउँदै रामगडवासम्म पुगेर फर्कियो ।
वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई दिशामुक्त बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित जनचेतनामुलक अभियानमा एक बिहान सामेल हुँदाका परिदृष्य हुन् यी । तराई क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा खुला ठाउँमा शौच गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । यसले वरिपरीको वातावरणमा दुर्गन्ध त पैmलिन्छ नै, विभिन्न रोग निम्त्याउने पनि उत्तिकै सम्भावना हुन्छ । फोहोरकै कारण कतिपय ठाउँमा हैजा, महामारी पनि फैलिन्छ । हुन त यो अवधारणाबारे सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट जनचेतना प्रवाह गर्ने काम भइरहेकै छ । विभिन्न संघसंस्थाले विविध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तर, परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन निकै हम्मे परेपछि उपमहानगरपालिकाले उज्यालो नहुँदै गाडीको साइरन र चेतनामुलक नारा बजाउँदै नगरबासीलाई सचेत बनाउने काम गर्दै आएको छ ।
वास्तवमा यो कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाका लागि वाध्यात्मक जिम्मेवारी बनेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत २०६८ सालमा ‘बालमैत्री स्थानीय शासन (सीएफएली)’ अवधारणा लागू गर्यो । घर, परिवार, विद्यालय तथा वरिपरीको समाजदेखि सरकारको संयन्त्र समेत बालमैत्री हुनु पर्ने अवधारणा अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएको हो । जसअन्तगरगतको मुख्य एक कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रलाई खुला दिशामुक्त घोषणायोग्य बनाउनु हो । कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म २१ ओटा वडालाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका छन् । अब ८ ओटा वडामा पहल जारी भएको उपमहानगरका अधिकृत तथा सीएफएली कार्यक्रमका फोकल पर्सन कर्ण बताउँछन् ।
त्यसो त उपमहानगरपालिकाको प्रयासमा यस क्षेत्रका बालबालिकाको पनि उत्तिकै योगदान छ । सीएफएलीअन्तगर्त गठित जिल्ला, नगर, गाविस र वडा बाल क्लबहरु छन् । त्यसमध्ये उपमहानगरपालिका उक्त अभियानमा नगरस्तरीय बाल क्लबले सहयोग गर्दै आएको क्लबबा अध्यक्ष कृष्ण पटेल बताउँछन् । क्लबका सदस्यहरुले आआफ्नो समाजमा दिशापिसाब शौचालयमा गर्नु पर्ने, घरमा शौचालय अनिवार्य बनाउन अभिभावकलाई सुझाव र दबाब दिदै आएको उनी बताउँछन् । क्लबका सदस्यहरु मिलेर केही समय अघि हरेक बिहान टोलटोलमा सिटी फुक्ने, टिन ठोक्ने जस्ता अभियान चलाए ।
त्यसबाट धेरैले खुला ठाउँमा दिशा गर्न छाडेको क्लब सदस्य रुवि कुशवाह बताउँछिन् । क्लबका अर्का सदस्य मोहम्मद अयुव हुसेन भन्छन्, ‘वास्तवमा हाम्रा आमा, दिदीबहिनीलाई खुला ठाउँमा दिशा गर्नु पर्दा निकै गाह्रो हुन्छ । घरमा शौचालय नहुँदा पुरुषसँगको लाजले उहाँहरु ३/४ बजे नै खेततिर दौडिनु हुन्छ । त्यस्तो गर्दा कहिले लड्ने, कहिले सर्पको डसाइमा पर्ने जोखिम हुन्छ । तर, वाध्यकारी रुपमै भएपनि शौचालय घरमै बनाएपछि उहाँहरुले धेरै सुविधा भएको छ । फोहोर र दुर्गन्धबाट उन्मुक्ति पाउने अर्को पक्ष त छँदै छ ।’ सरकारको यो गतिविधीलाई बाल क्लबहरुले निरन्तर सघाउने जिल्ला बाल क्लबका अध्यक्ष जया शाह बताउँछन् । यस्ता कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन नयाँ रणनीति तयार गर्दै गरेको अधिकृत कर्णको भनाई छ । जे होस् निकट भविष्यमा नै औद्योगिक नगरी विरगञ्ज खुला दिशामुक्त क्षेत्र बन्ने संकेत देखिएको छ । शकुन्तला जोशी